Ogaden News Agency (ONA) – Nin waloowba baadh sababta Location-ka South Africa laguugu dilayo – Omar Jigjiga
Nin waloowba baadh sababta Location-ka South Africa laguugu dilayo – Omar Jigjiga
Qofka aadamaha wuxuu Eebbe ku mannaystay caqli iyo fikir uu ku ogaado kolba xaalada uu ku sugan yahay, ogaanshaha ka dibna uu ka go’aan qaato siduu wax uuga baddali lahaa xaaladaas uu ku sugan yahay haday noqoto mid uusan u bogin.
Waa masuuliyad saaran Bani-Aadamka gaar ahaan inta xambaaratay waajibaadka diinta islaamka ee ajibtay yeedhidii loogu yedhya diinta wanaagsan ee islaamka inay ka fikiraan xaaladay kusugan yiiin oo haday tahay mid qallafsan ay fiiriyaan bal sababtii keentay iyo sidii loog abixi lahaaba .
Qoladaan fikirkaas iyo caqli celcelintaas la imaanin waa kuwa lagu tilmaamay inay ka garaad xunyihiin xoolaha oo iyagu calooshooda uun ka fikira oo hadya caloosha mugeed helaana shahwadooda ka fikira.
Akhristoow waxaa is waydiin mudan wadanka South Africa oy kunool yihiin dad Soomaali ah oo aad u tiro badan maxaa keenay sababta ay wadnakoodii uga soo carareen kuna yimaadeen S.Africa? Iyadooy Soomaali aad utiro badnai ku nooshahay wadanka K/Afrika ayay Soomalaida ksoo dooshay Ogaadeeniya ay aad u badan yihiin. Maxaa keenay hadaba in tiro intaas la’eg ay wadankoodii kasoo tagaan una cararaan wadan kale oo shisheeye?
Waa suaal ubaahan ka fikir iyo cagliga oo la rogrogo. Waxay jawaabtu ubadataa marka dadkaas qaarkodo la waydiiyo oo dhalinyaro u badani inay ku jawaabaan; “Waddankan waan u soo shaqo tagay”. Inkastoo ay dhacdo in qaarkood ay si kale hadalka u dhigaan, hadana macnahaa umbuu xambaarsan yahay.”
Marka la fiiriyo garaadka dhow ee bani-aadamka oo inta badan weelayn kara waxa markaas ka hor muuqda oo kaliya jawaabtaasi waxay noqonaysaa sax oo dadku way soo shaqo tageen,waxaase isla jawaabtaas ka dhalan kara suaal kale oo odhanaysa; ”Maxaa sababbay inaad wadan fog usoo shaqo tagto oon waliba ammaan ahayn adigoo heli kara inaad wadankaaga hooyo ka shaqaysato?” Jawaabta ayna cidna ka warwareegi karinbaa waxay tahay waddankaygii inaan ka shaqaysto dantu way ii saamixi wayday oo gumayste ayaa iiga dacareeyay sababtoo ah meel gumaysi ka jiro shaqo madax banaan lagama hirgalin karo.
Akhristoow; Ogaadeeniya kama khayraad yaraateen South Africa, hadii la helo dowlad xalaal ah oo dadka iyo dalka dan u ah taasoo ka shaqaysa baahida shacabka, kana danqata dhibaatada shacabka soo gaadhaysa ee amaandarrada iyo shaqa la’aantu ugu horeeyaan, intay ku mashquuli lahayd ilaalinta gumaystayaasha iyo dacaayad aan mira-dhal ahayn oo kharash xoogan lagu bixiyo.
Ogaadeeniya kama dhulbeereed yara South Africa, waliba waxaan odhan karnaa iyadaa ka carra-san, kagana habboonaan lahayd tabcashada iyo wax soosaarka sababtoo ah waa dhul ciiidiisu dihin tahay oo leh dooxyo dhulbeereed u hanaansan iyo wabiyo iyo togaga waawayn iyo laagaha balbalaadhan ee qayb weyn ka qaata waraabinta dhulka fidsan ee wax soosaarka yeelan kari lahaa hadii loo hagar baxo xoriyadna loo helo.
Ogaadeeniya waxay hodan ku tahay xoolaha nool sida 3da caanaha macaan, dameeraha iyo ugaadha oo mid waliba wax soo saarkiisa gooni looga faaiidaysan karo.
Akhristoow ujeedadaydu ma ah inaan ka sheekeeyo dhaqashada Geela iyo haydaartada loo maro, waxayse doonistaydu tahay inaan kuu sharxo oo kali ah in dhaqashada Geela iyo ka shaqaynta South Africa ay isku dhib yihiin hadayna dhaqashada geelu kaba dhib yarayn. Nugulkii ayaa iyagu kasii dhibyar oon laguba soo qaban karin nolosha xammaali ee ka jirta Koonfur Afrika.
Haddaba akhristoow waxaad yaqiinsataa in waddankaagu uuna u dhalanin shaqo yaraan ee shaqooyinkii la abuuri lahaa dowladii abuuri lahaydi ayna jirin. Waxaad adigu karti kula soo bixi lahaydna Gmaysi kaa hor istaagay, eeyna ahayn in wadankanaga uusan wax soosaar lahayn ama ay kartiyaraani na hayso ee arintu ay tahay sidaas cagsigeeda oo wadankeena kaad hada ka xamaalato eed wax ka soosaarto ka fiicanyahay adna xooga iyo xeelada aad South africa wax kaga soosaarto aad leedahay, dhibkuse yahay gumaysigii oo dowladii shaqada kuu abuuri lahayd oo isagii ka dhigtay gabaad uu ku gubado, waxaad kartidaada lakaashan lahaydna kaa curyaamiyay.
Sidaas daraadeed dhalinyarada ku dhammaanaysa South Africa waa inay fahmaan waxa sababay geerida naxdinta lehee maalin walba haysata, isla markaana ka fikiraan siday arintaas xal ugu heli lahaayeen wadankoodii oo xor ah oy xoogooda kaga shaqaystaan sidii lagu heli lahaana ka fikiraan.
Waad mahadsan tihiin waa Zakariya oo idin leh;
Hadaad xabad shafka u dhigi mida xorenta Ogadeniya u dhig oo ku laabo dalkeenii buu dahab ka buuxaaye. Waxaana idin leyahay; ”Nin waloowba baadh sababta location-ka South Africa laguugu dilayo maxaa keenay”?